Rudzikunuro Kutyisidzira Chitsva FBI Kunetsekana | Linux Vakapindwa muropa
Rudzikunuro yakaipa kodhi yekombuta inonyora zvemukati zvemakomputa akarwiswa. Iyo inogadzirwa uye inochengetwa nematsotsi e-cyber kuitira kuti uwane rudzikunuro. Kazhinji izvi zvinobhadharwa mumakristcheni anoita kuti zvive zvakaoma kuteedzera.
1 Kutyisidzira kwerudzikunuro
1.1 Kubva kuRussia nerudo
2 Rudzikunuro uye Linux
Rudzi urwu rwekurwiswa rwuri kudzokororwa kazhinji zvekuti FBI, (iro sangano rinotarisira kurwisa kutyisidzira mukati meUnited States) rinopa kukoshesa kumwechete pakurwisa kwarakapa hugandanga mumashure paGunyana 11, 2001.
Mazuva mashoma apfuura, cybercriminals yakanangana nepasirose yakakura yepasirese, masvondo mashoma mushure mezvakaitika kumunhu aishandisa pombi yaitakura peturu kuenda kunzvimbo dzeEast Coast. Mune ino kesi, akabatwa aifanira kubhadhara madhora zviuru mazana mana nezviuru kuti adzokere zvakare kutonga kwavo uye kudzoreredza sevhisi.
Christopher Wray, director weFBI, anotarisira kuti kurwiswa kwazvino kuchaita vakuru nevagari kuziva kukura kwedambudziko iri.
Zvino zvavanoona kuti zvinogona kuvakanganisa kana vatenga gasi papombi kana kutenga hamburger, ndinofunga pachave nekuziva kuri kukura kwekuti isu tese tiri muhondo iyi pamwe chete.
Iyo FBI ndeyekufunga kwekuti pane zana marudzi erudzikunuro, imwe neimwe ichinongedza pakati pegumi nemazana zana zvinangwa. Iko hakuna fungidziro inobvumirana yemutengo kuhupfumi hweUS, fungidziro dzakachengetedza dzinotaura nezvemazana emamirioni nepo vamwe vachifunga nezvezviuru.
Kubva kuRussia nerudo
Vakuru veUS vanopa mutoro wekurwiswa kwesvondo rino kuJBS SA, kambani hombe yekutengesa nyama, kuchikwata chematsotsi chiri muRussia, uye masosi eWhite House akasimbisa kuti Mutungamiri Biden aronga kuunza dambudziko panguva yemusangano neMutungamiri weRussia Vladimir. Putin muSwitzerland akarongerwa pakati pemwedzi uno. Bazi rinotungamira haritongi kunze kwekutsiva kuRussia Federation nekuda kwekurwiswa uku.
Panyaya iyi, Director Wray vakati:
Kana hurumende yeRussia ichida kuratidza kuti inotora nyaya iyi zvakanyanyisa, pane nzvimbo yakawanda yekuti varatidze kufambira mberi chaiko kwatiri kusiri kuona izvozvi.
Rudzikunuro uye Linux
Kupesana nekutenda kwakakurumbira, Linux-based makomputa haana immune kuhlengwareware. Zvinoenderana neiko yakashuma Kasperly security company:
Munguva pfupi yapfuura, isu takawana nyowani yefaira yekunyorwa kweTrojan yakavakwa seELF inoitisa uye inotarisirwa kunyorera data pamichina inodzorwa neLinux-based operating system.
Mushure mekuongorora kwekutanga, takaona kufanana mune kodhi yeTrojan, zvinyorwa zvemanyorerwo, uye nzira yakajairika yekubiridzira, zvichiratidza kuti takanga tawana Linux kuvaka kweyaimbozivikanwa RansomEXX mhuri yehlengoware. Iyi malware inozivikanwa kurwisa masangano makuru uye yainyanya kushingaira kutanga kwegore rino.
RudzikunuroEXX ndeye yakanyanya Trojan. Imwe neimwe yemarware sampuro ine ine rakaomeswa zita reanotambudzwa sangano. Zvakare, zvese kuwedzerwa kweiyo yakavharidzirwa faira uye email kero yekutaura nevabiridzi vanoshandisa zita remunhu akabatwa.
Makambani akati wandei akadonha neiyi malware mumwedzi ichangopfuura, kusanganisira Texas Dhipatimendi Rekufambisa (TxDOT) uye Konica Minolta.
Imwe nyaya inozivikanwa yaive yaLilu, a ransomware iyo, kana ikawana midzi yekuwana, inoshandura mafaera nekuavharira nekushandura kuwedzerwa kwavo ku .lilocked. Kunyangwe isinga shandure mafaira emafaira, inovharira vamwe padanho revashandisi, ichidzivirira kupinda pamapeji ewebhu, semuenzaniso.
Ini handizive kusvika papi hurumende dzeIbero-America dzinoziva nezve njodzi iyi. Munyika yangu mave mune zvimwe zviitiko, zvinosanganisira main Internet opareta uye mamwe masangano eruzhinji. Chinhu cheInternet chinoshanda ndechekuti mumwe munhu akavhura faira pakombuta yebasa yaaisafanirwa kuvhura.
Mumwe wangu Isaac akarongedza mamwe matanho ekuchengetedza atinogona kutora kudzikisa njodzi yekuwira mukukuvara kwakadai.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Rudzikunuro kutyisidzira ndiko kunetseka kutsva kweFBI
Ini ndinoshandisa Arch BTW
Haufarire dhizaini yeProton yeFirefox? Dzokera kune yekare interface ... iwe uchikwanisa